တောင်သမန်သားလေး: January 2016
iPhone7မှာတော့ iPhone 6s တုန်းက ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ 3D touch ကို ပိုပြီး အသုံးပြုထားတာတွေ့ရနုိုင်ပါတယ်။ Application icon တစ်ခုချင်းစီကို Home screen မှာတင် အကြီးချဲ့ နုိုင်ပြီး Home Screen ကို မိမိစိတ်ကြိုက် စီမံပြုလုပ်နုိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ Home button နဲ့ touch ID ပါ။ Home button ဟာ အရင်ကလို ခလုတ်ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ပဲ Screen Display နဲ့ တစ်ပြေးညီ ဖန်တီးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Home Button မှာတင် မိမိလတ်တလေ အသုံးပြုပြီးထားတဲ့ application များကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Screen display ကို လက်နှစ်ချက်နဲ့ အသာ တို့လိုက်တဲ့ Screen ပွင့်လာခြင်း ၊ ပိတ်သွားခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကတော့ Iphone Trick ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ ဖန်တီးထားတဲ့ iPhone7နဲ့ iOS 10 တို့ရဲ့ စိတ်ကူးပုံဖော်မှုများဖြစ်ပါတယ်။
Android OSဖုန်းများအား ယူနီကုတ်မြန်မာဖောင့်ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ MM Unicode Installer v1.0 Apk
MM Unicode Installer သည် Android စမတ်ဖုန်းများကို ယူနီကုတ်မြန်မာစာထည့်သွင်းနိုင်မည့် မိုဘိုင်း Application တစ်ခုဖြစ်သည်။
MM Unicode Installer မိုဘိုင်းApp အားအသုံးပြုရန် မိမိဖုန်းသည် Root ဖောက်ပြီးသားဖြစ်ရပါမည်။
MM Unicode Installer မိုဘိုင်းApplication တွင် ယူနီကုတ်မြန်မာဖောင့်ဒီဇိုင်းများစွာပါဝင်ပြီး မိမိအသုံးပြုလိုသော Unicode ဖောင့်အားရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာသုံး ယူနီကုတ် မြန်မာစာအားထည့်သွင်းအသုံးပြုလိုသော မိုဘိုင်း User များတွက် MM Unicode Installer အားအောက်ပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by lin linn at 1:01 AM
မြန်မာစာယူနီကုတ်ကီးဘုတ် အသုံးပြုလိုသူများတွက် M3 Keyboard (Myanmar) v1.0.0 Apk
ယူနီကုတ်မြန်မာဖောင့်အားအသုံးပြုထားသော ဖုန်းများတွက် ယူနီကုတ်မြန်မာကီးဘုတ်လေးအားတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ယခု ယူနီကုတ်ကီးဘုတ်တွင် မြန်မာ၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ ပအိုဝ်း၊ ကယား၊ ကရင် ရိုးရာစကား (၆) မျိုးဖြင့်အသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး နောက်ထွက်မည့်ဗားရှင်းအသစ်တွင် ထပ်တိုးပေးသွားမည်ဟုသိရပါတယ်။
ကီးဘုတ် ဒီဇိုင်းများ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကီးဘုတ်၏ နောက်ခံအ​ရောင်ကိုလည်း မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာအရောင်နှင့် ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မြန်မာစာ Unicode အသုံးပြုနေသူတိုင်းတွက် စာရိုတ်ရန်ကီးဘုတ်တော့လိုအပ်ပါမည်။
M3 Keyboard (Myanmar) အားအောက်ပါ Link မှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by lin linn at 1:00 AM
ဖုန်းနံပါတ်အတုပြုလုပ်ပြီးတော့ Viber တို့Facebook တို့ လျှောက်ကြမယ်
ဖုန်းထဲကနေ ဖုန်းနံပါတ်အတုပြုလုပ်ပြီး Viber တို့Facebook တို့Line တို့ ပြုလုပ်နည်းလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အသုံးပြုနည်းကိုတော့ ဖုန်းနံပါတ်အတုပြုလုပ်တာက အစ Viber အကောင့်န်တွက် Code6လုံးယူပြီး Viber အကောင့်န်တစ်ခုဖွင့်လို့ ရတဲ့အထိ Screenshot ပုံတွေနဲ့ လက်တွေ့ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
အားလုံးဘဲလိုအပ်မယ်ဆိုရင် Share လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆေ့ာ့ဝဲလ်လေးကို Play Store မှာ Vpn ကျော်ပြီးမှဒေါင်းယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အောက်က Link မှာတော့အလွယ်တကူဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by lin linn at 12:59 AM
ANDROID 5.0 နှင့် အထက် Lollipop Myanmar Font Installer
ဆရာ Ko Lin ရေးထားတဲ့ Tool ပါ... Android Lollipop တွေကို မြန်မာစာ အလွယ်တကူ သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
Bootsong လေးပါ အပိုလေးတစ်ခုထည့်ပေးထားပါတယ်.. Boot Song Change ဖို့အတွက် Button လေးတစ်ခု ထည့်ထားတယ်။
Power On ရင် ထွက်မဲ့ အသံက မင်းရဲကျော်စွာ ဗိုလ်နေတိုး ...........smile emoticon
Power Off ရင် ထွက်မဲ့အသံက မိုးရေထဲ့မှာ အချစ်ရေခဏလေးသေးပေါက်ချင်တယ်..
ဆိုတဲ့ ဟို အဆိုကျော်လေး ............
Root ဖောက်ထားဖို့တော့လိုအပ်မယ် လိုအပ်တဲ့သူတွေ အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါ...
Posted by lin linn at 12:57 AM
Facebook Password မေ့သွားရင် အသစ်ပြန်လည်ရယူနည်း
မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ facebook account မှာ Password မေ့သွားလို့ ရှိရင် Password အသစ်ပြန်ယူနည်းကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မိမိ facebook အကောင့်န် Hack ခံထိသွားရင်လည်း ယခုနည်းအတိုင်း Password အသစ်ပြန်လုပ်ပြီး ပြန်ယူနိုင်ပါတယ်။
Password အသစ်ရယူနည်းကိုအောက်မှာ ScreenShot ပုံများဖြင့်လက်တွေ့ ရှင်းပြထားပါတယ်။
facebook အသုံးပြုသူတိုင်းတွက် လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။
လိုအပ်ပါက မိမိအကောင့်န်ထဲကို Share လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Posted by lin linn at 1:05 AM
Facebook Account အားအပြီးဖျက်ပစ်နည်း
Facebook အကောင့်န် အပြီး Delete လုပ်ချင်သူတွေတွက် Account Delete လုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်သူများ Share ထားနိုင်ပါတယ်။
အောက်ကလင့်ခ်လေးထဲဝင်ပြီး Facebook Password ရိုတ်ပြီး Submit ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့Logout တန်းကျသွားပါလိမ့်မယ်။
Posted by lin linn at 1:04 AM
Facebook မှာ မိမိ Block ထားတဲ့သူကို ပြန်လက်ခံတဲ့နည်း
facebook မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိမိ Block လုပ်ထားတဲ့သူတွေကို ပြန်ပြီးလက်ခံတဲ့နည်းကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
အောက်ကလင့်ခ်ထဲဝင်ပြီး Blocking ကိုနှိပ်လိုက်ရင် မိမိ Block ထားတဲ့လူမျးကို တွေ့လိမ့်မယ်..ပြန်ပြီးလက်ခံမယ်ဆိုရင် Unblock ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။
Facebook Messenger မှာ စကားမပြောချင်စာမပို့ ချင်တဲ့သူတွေကို တစ်ဦးချင်းမက်ဆေ့ပိတ်နည်း
Facebook Messenger မှာ သင်စကားမပြောလိုတဲ့သူများ သူတို့ တွေသင့်ကို စကားလာပြောလို့ မရအောင် တစ်ဦးချင်းမက်ဆေ့ပိတ်နည်းကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အောက်မှာ ScreenShot ပုံများဖြင့်လက်တွေ့ ရှင်းပြထားပါတယ်။
Posted by lin linn at 1:02 AM
ZTE ZMax2ကို Root လုပ်နည်း ကွန်ပျူတာမလို
ZTE ZMax2ကို Root လုပ်ချင်တဲ့ညီအစ်ကိုတွေအတွက်
ပြန်လည်ညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ ဒီဖုန်းကို Root လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့
ကွန်ပျူတာမလိုပါ Kingroot app ဖြင့် ဖုန်းမှာတင် အလွယ်တကူ
Root လုပ်ရန်အတွက် Kingroot Apk နဲ့ Root လုပ်နည်းအပြည့်အစုံကို
Download Here KingRoot Apk latest
Posted by lin linn at 12:51 AM
Facebook 61 & Messenger 55 apk
Download Facebook 31 MB
Download Messenger 22 MB
Posted by lin linn at 12:48 AM
မြန်မာစာယူနီကုတ်ကီးဘုတ် အသုံးပြုလိုသူများတွက် M3 K...
ဖုန်းနံပါတ်အတုပြုလုပ်ပြီးတော့ Viber တို့Facebook...
ANDROID 5.0 နှင့် အထက် Lollipop Myanmar Font Insta...
Facebook မှာ မိမိ Block ထားတဲ့သူကို ပြန်လက်ခံတဲ့နည...
PowerDirector Video Editor Android app
ဖုန်း၏ ပါဝါ ခလုတ်မနှိပ်ဘဲ အော်တို ဖွင့်/ပိတ် လုပ်န...
♪ Android Phone အချို့နဲ့ System update error ♫
Facebook Messager ကို အင်တာနတ်မရှိဘဲ အော်တိုစာပို့...
♪ Windows 10 ၏ Cortana က အီးမေးများမှ ကတိပေးထားမှုမ...
အင်္ဂလိပ်စာ Level အလိုက်သင်နိုင်မယ့် English Listeni...
ဖုန်းထဲက နေပြီး Free ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ - GrooVe ...
တစ်ချက်ကလစ်ရုံနဲ့တင် Reboot, Recovery, Bootloader,...
ဖုန်းတစ်လုံးထဲမှာ Facebook Messenger နှစ်ခုကိုတပြိ...
ဖုန်း တစ်လုံးထဲ၌ Viber နှစ်ခုသုံးနိုင်မည့် App
Viber ကနေမှားပို့ မိလိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို မိမိဖုန်...
♪ Telenor ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေတော့ သိထားသင့်တ...
YouTube ပေါ်က(MP3)သီချင်း ၊ ဗွီဒီယိုတွေကိုအလွယ်တကူေ...
Samsung Galaxy S4 SGH-I337M ဖုန်းဗားရှင်း Android ...
Samsung Galaxy S3 Neo GT-I9301I ဖုန်းဗားရှင်း 4.4....
KINGO ROOT v2.8 build125 (Root Almost Any Android ...
Samsung Galaxy S4 C-Spire SCH-R970X ဖုန်း ဗားရှင်း...
Root ဖောက်ထားပြီးသားဖုန်းတစ်လုံးအတွက် ဆောင်ထားသင့်...
♪ စိတ်ကြိုက် Ringtone လေးတွေဖန်တီပေးနိုင်တဲ့ - Rin...
Wifi Password တွေကိုရှာပေးမယ့်-Wi-Fi BRuteforce Ha...
ဓါတ်ပုံတွေကို မိမိစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင် ဖန်တီးနို...
KineMaster – Pro Video Editor FULL v3.2.0.7275 Cra...
ဖုန်းအားအမြန်ဝင်စေတဲ့ - Droid BatterySaver v.1.397...
♪ iOS မှာ Facebook နဲ့ Twitter ကြောင့် Internet Da...
Advanced Download Manager Pro 5.1.0 Cracked apk
၀က်ဆိုဒ်တွေထဲမှာ မြန်မာစာမမှန်သူများတွက်4Myanmar...
စာရိုတ်ဖို့ ပျင်းနေပါသလား? ငပျင်းကီးဘုတ်ရှိတယ်နော်...
Huawei ဖုန်း များ မြန်မာ font ထည့်သွင်း ပေးမည့် Em...
ဖုန်းထဲကနေ ဂီတာတီးချင်သူများတွက် အကောင်းဆုံး Real ...
♪ “Android သုံး၍ အားလုံးကျန်းမာ” ♫
ဓာတ်ပုံ၏နောက်ခံပုံစံများကို စတိုင် အမျုိးမျိုးပြော...
Facebook မှာ ဗီဒီယိုတွေကိုတွေ့ တွေ့ ချင်းဘဲဒေါင်းယ...
ဖုန်းဆော့ဝဲလ်နှင့် မိုဘိုင်း App များကိုသော့ခတ်ထား...
Android ဖုန်းများ မြန်မာစာထည့်သွင်းနိုင်သည့် MPPG ...
အသံအရည်အသွေးကောင်းကောင်းနဲ့အသံဖမ်းယူပြီး Faceboo...
“Unfortunately WhatsApp Has Stopped” ကိုဖြေရှင်းနည...
အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူမယ့် Apk for Android Phone
မိမိ Facebook အကောက်ကို လုံခြုံရေးမြှင့်တင်နိုင်ဖိ...
LG F6 ဖုန်း ဗားရှင်း Android 4.4 ကို Root လုပ်နည်း...
ဖုန်းပေါင်းများစွာကို ဖုန်းထဲကပင် ROOT နိုင်တဲ့ RO...
ဖုန်းပေါင်း 6000 ကျော်လောက် ROOT နိုင်တဲ့ BAIDU RO...
♪ ဆရာကြိးပီမိုးနင်းစာအုပ်များ ၁၈အုပ် (စာအုပ်၁၈အုပ်...
♪ Effect ပေါင်း 620 ကျော်ပါဝင်တဲ့ - Pho.to Lab PRO...
မြွေလှေကား ဂိမ်း apk 8 mb
မိုဘိုင်းဖုန်း ၏ Hardware ပစ္စည်းများ ပြုပြင်ရေး နည...
Android & iOS ဖုန်းအမျိုးမျိုး Sale & Service
Samsung Galaxy Alpha ဖုန်းကို TWRP Recovery ထည့်သွ...
ဖုန်းများစွာကို Root လုပ်နိုင်တဲ့ 百度一键root v2.4.0
Android OS ဖုန်းများတွင် Root ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးနည်း
သင့်ရဲ့ Facebook Profile ထဲကိုဘယ်သူတွေဝင်ကြည့်သွား...
သင့်ချစ်သူ Online ပေါ်တတ်လာရင်အချက်ပေးစေမည့် Online...
Mp3 Mp4 သီချင်းတွေဒေါင်းယူနိုင်မယ့် မိုဘိုင်းApp
သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံပေါ်မှာ Tattoo ထိုးမယ့် Tattoo My Pho...
ဖုန်းထဲမှာပါဝင်လာတဲ့ Memo မိုဘိုင်းApp ဖြင့် Pdf စ...
ဖုန်းမှာ အရေးပေါ် သွေးအလှူ ရှင်တွေ ကိုရှာပေးနိုင်တဲ...
♪ “Wi-FM (သို့) ပိုမိုမြန်ဆန်ချောမွေ့စေမည့်အင်တာနက...
ဖုန်း Hardware ကိုလေ့လာနေတဲ့သူများအတွက် Hardware B...
baidu cloud အကောင့် ဖွင့်နည်း
ဖုန်းလာရင် မိမိအမည်ခေါ်ပေးနေမည့် Caller Name Speake...
Gold Go Keyboard Theme v1.85.5.83Apk
ဖုန်း Lock အလန်းစားလေး - App Lock – Fingerprint & ...
ဖုန်းမှာ ပုံတွေအကောင်းဆုံးပြုပြင်နိုင်တဲ့ - Design...
Xiaomi နဲ့ Meizu ဖုန်းတွေ ကို root မလိုပဲ google s...